You are hereHome » Workshop & Seminors	Assessment Workshop
Holding the " Assessment Workshop" , cooperating with SMEs Development Center and PUM Netherlands Senior Experts With cooperation and coordination SMEs Development Center under Ministry of Industry and PUM Netherlands Senior Experts , to provide assistance to SMEs entrepreneurs " Assessment Workshop" was held on 8th July, 2013 at SMEs Development Center and (70) SMEs from Yangon Region attended this workshop. From this workshop, following SMEs are provided assistance by Netherlands Senior Experts.1. Pyae Sone artificial Limbs and Legs 2. Arrow Brother Coffee and Tea Plantation3. Shwe Myanmar Puppetry Workshop With cooperation and coordination SMEs Development Center under Ministry of Industry and PUM Netherlands Senior Experts ,to provide assistance to SMEs entrepreneurs " Assessment Workshop" was held on 9th September, 2013 at Mandalay Hill Hotel, Mandalay and (128) SMEs from Mandalay Region attended this workshop.From this workshop, following SMEs are provided assistance by Netharlands Senior Experts.1. Sunrise Architecture Development ( Rubber Plantation )2. Aung Nyein Chan ( Papermill ) Pages1
"Cluster Development Awareness Training" သင်တန်းကျင်းပခြင်း	"Cluster Development Awareness Training" စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဌာနနှင့်United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်း၍ "Cluster Development Awareness Training"သင်တန်းကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့တွင်အမှတ်(၃၅-ဘီ/၁၅)၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နည်းပညာနှင့်ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးဌာန ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်တင်မာလူမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်UNIDOအဖွဲ့အစည်းမှ Chief Technical Advisor ဖြစ်သူMr. Michele Boario အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းသင်တန်းသို့SMEလုပ်ငန်းရှင်များ၊အသင်းအဖွဲ့မှပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်SMEဌာနမှဝန်ထမ်းများ၊စုစုပေါင်း(၇၅)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုအစုအဖွဲ့များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနည်းလမ်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုသဘောပေါက်နားလည်စေရန်နှင့်ဆင့်ပွားသင်တန်းများကျင်းပပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်လည်းအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်
၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း "Cluster Development Awareness Training"ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ်များ
စဉ်နေ့စွဲတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်မှတ်ချက်၁၆.၄.၂၀၁၅ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျင်းပပြီး၂၂၇.၄.၂၀၁၅ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျင်းပပြီး၃၃၀.၄.၂၀၁၅ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကျင်းပပြီး၄၂၁.၅.၂၀၁၅ချင်းပြည်နယ်ကျင်းပပြီး၅၁၅.၆.၂၀၁၅ရှမ်းပြည်နယ်ကျင်းပရန်၆၁၇.၆.၂၀၁၅ကယားပြည်နယ်ကျင်းပရန်၇၈.၇.၂၀၁၅မွန်ပြည်နယ်ကျင်းပရန်၈၉.၇.၂၀၁၅ကရင်ပြည်နယ်ကျင်းပရန်၉၂၇.၇.၂၀၁၅မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျင်းပရန်၁၀၂၈.၇.၂၀၁၅စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျင်းပရန်၁၁၂၉.၇.၂၀၁၅မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကျင်းပရန်၁၂၄.၉.၂၀၁၅ရခိုင်ပြည်နယ်ကျင်းပရန်၁၃၂၉.၉.၂၀၁၅တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကျင်းပရန်၁၄-ကချင်ပြည်နယ်ကျင်းပရန်၁၅-နေပြည်တော်ကောင်စီကျင်းပရန် 2013-2014 © copyright SME , Developed by Naung Yoe I.T Solutions